बंगलादेश बैंकले कति दिदैं छ बोनस र नगद लाभांश ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » बंगलादेश बैंकले कति दिदैं छ बोनस र नगद लाभांश ?
काठमाडौं - नेपाल बंगलादेश बैंकले १२% बोनस सेयर र कर तिर्नसमेत गरी ३.७९% नगद लाभांश दिने भएको छ । बैंकको शनिबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले बोनस र नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिको निर्णयलाई राष्ट्र बैंक र आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गर्न भने बाँकी नै छ ।
हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २१ करोड ९० लाख ५९ हजार रुपैयाँ छ । १२% बोनस दिइसकेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ८ करोड ५३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा बैंकले १ अर्ब २० करोड ३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी २८ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १४८ रुपैयाँ छ ।
प्रकाशित मिति : Sunday, September 10, 2017